KAMBA kelinay sy ny coup de gueule avy amiko – Malag@sy Miray
Maro tamintsika mpikirakira aterineto no mahalala (na nahalala) ny tantaran’i Kamba, ilay zaza kambana nilàna fandidiana natao teny amin’ny HJRA Ampefiloha).
Tsy vitsy koa no nahafantatra (ireo izay nanaraka hatrany am-boalohany ny tantara) fa tsy nankasitraka loatra ny hanaovana opération an’iny zanany iny ny reniny, noho, ny tahotra sy ny maro tsy tanisaina.
Resin’ny sasany tamintsika lahatra ihany anefa ilay reny mahantra ka nanaiky ny handraisana an-tànana an-janany (rehefa nomena izao karazan-toky rehetra azo naroso izao. Izaho aloha tsy anisan’izay nampanatena volana an!)
Roso ny dia ka nandeha niakatra an’Iarivo ilay ankohonana kely.
Be ireo nanohana tamin’ny fanaovana izay hahatontosa ilay fandidiana. Vita soa aman-tsara izany.
Be amintsika koa no efa nahafantatra tamin’izany fotoana fa tsy ny fandidiana sy n famerenana ny atidohan’ny zaza ho amin’ny toerany fotsiny no asa miandry, fa mbola be no ho sisa.
Ity SISA ity no mba isarihako ny sainareo rehetra izay ‘impliqués’ tamin’iny resaka KAMBA iny. Izahay (na izaho no marimarina kokoa) dia nilaza tsara tamin’ireny fotoana ireny fa tsy manana ny ho enti-mandray anjara amin’ny ara-bola. Saingy kosa vonona ny hitondra izay fanohanana ara-moraly sy izay voatsirambin’ny tànana rehefa tonga aty Antananarivo ry zareo. Notanterahanay mivady an-tsakany sy an-davany ny teny nataonay, mandra-panatitray azy teny Ambodivona rehefa nalefa nody izy sy ny ankohonany.
Angamba noho ilay fifaneraseranay betsaka tamin’ity ankohonana kely ity nandritry ny fivahinianany teto an-drenivohitra, fa rehefa tonga tany izy ka misy ny tsy metimety amin’ny zaza, dia izahay no feno arina voalohany indrindra. Nanao izay azonay sy tratry ny herinay natao ihany izahay tany aloha (nanampy anay sy isaoranay betsaka tamin’izay i Madame Mavo sy Mino). Tsy nahalala anarana afa-tsy Avylavitra, Mavo, Mino intsony ireo fianakaviana kely ireo rehefa avy eo. Satria izay natoniny dia nanosi-boho-tànana azy sy nametrapetraka azy daholo. Miala tsiny fa tsy hanonona anarana eto aho, satria nisy tokoa ny olona izay voateniteniny matetika, indrindra fa noho ny resaka ara-bola teny amin’ny hopitaly, noho ny zavatra ‘heveriny ho tsy nety’ tsikariny teny.
Dia lasa ny saiko hoe ‘NATAO HO FILAN-DERA SY VONINAHITRA VE SANATRIA’ i KAMBA? Asa lahy!!! Tadidio fa misy fikarakarana tsy maintsy atao amin’iny zaza iny isam-bolana, ary an,gamba aza mety ho mandra-pahafatiny mihitsy. Efa mba nosainintsika ve izany? Sa dia ny tamin’iny fotoana iny ihany no nahamaika? Ohatra amin’izany ny fandidiana tsy maintsy mbola hanalana ny valve natao ao anatiny ao, ny fandidiana ny hernie mahazo azy, ary ny chirurgie esthetique any aoriana. Ka ahoana, iza no mbola sahy?
Torana matetika ilay zaza ary nisy fotoana aza efa nentina indray tany amin’ny hopitalin’Androva tao Mahajanga.
Eto am-pamaranana ity coup de gueule ity dia mamela ahy kosa aloha ianareo rehetra hisaotra ireo namana NSD (na ny eto an-tanana na ny any ampita) sy fikambanana vitsy nanolo-tànana anay telo mianadahy ombam-bady aman-janaka (satria raha nitsivalana koa ny vady aman-janaka dia tsy nisy azonay natao). Isaorako ianareo ireo (hahatsapa tena avy hatrany hoe izay avy ianareo) na dia tsy nanaiky ny hotononina anarana eto aza. Andriamanitra anie hampitombo izay efa laninareo tamin’iny zaza iny, ary hanonitra izany avo zato, arivo heny.
20 février 2009 à 7:50
Tena miala tsiny raha mametraka fanontaniana adaladala fa i Kamba ve hafa noho ireo kambana nalefana tany Parisy?
Somary tsy naharaka tsara ilya tantara ny tena mantsy.
Tena zaza samihafa mihitsy no resahana eto. i KAMBA dia efa tany amin’ny tapaky ny taona 2008 tany no nanombohana nikarakarana azy, ary teto Madagasikara ihany no natao ny rehetra hatreto aloha. Hafa ny an’i Mahalatsa sy Mahagaga, ary hafa ny an’i Tombotsara (izay no anarany)
Misaotra anareo rehetra izay nahavita be t@ i Kamba. ala-nenina foana ny an’ny mpitsabo fa ny lahatra dia an’Andriamanitra. Samy mba manao arak’izay vitany daholo ny rehetra izay mba manam-pitiavana. Ao ny manampy an’i Mahagaga sy Mahalatsa, ao ireo manampy an’ity zaza kely vao 4 mois alefa hatao transplatation de foie any Paris… ao ireo manampy mivantana ny ankizy tsaboina ao amin’ny hopital des enfants…sns…sns… misaotra anareo rehetra tia ny mpiray tanindrazana. Ho tahian’Andriamanitra anie ianareo.